မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIII	2
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIII
Posted by Kyaemon on Nov 15, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different |2comments
ပညာရွှေအိုး လူမခိုး ၁၁၊ ကမ္ဘာ့ရာသီပြောင်းရခြင်းဟာ ဂျီဒီပီ က တရာခံလို့ ဆရာဦးထွန်းလွင်ကပြောပါတယ်၊
ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင် လူတွေက ကာဘွန်ပိုသုံးလာလို့ ကမ္ဘာ့ပူနွေးမှု တိုးလာကြောင်း
ပြောပါတယ်၊ (ရှေ့ဆောင်းပါး # ၂၂)
ဂျီဒီပီ တိုးအောင် ရေကာတာလုပ်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာ့ပူနွေးမှုကိုထဲ့စဉ်းစားဘို့လိုအပ်ကြောင်းပြော
ပါတယ်၊ဒါကြောင့် ဧရာဝတီ ရေကာတာ ၇ လုံးကို လုံးဝရပ်ဘို့ဆရာကြီးကပြောပါတယ်၊
တော်တော်ခေါင်းခဲ တဲ့ အလုပ်ပါ၊မြန်မာပြည်ရဲ့ဆင်းရဲတွင်းမှထွက်ရပေါက်လေးကိုပိတ်
ဆရာတို့Green Network တို့ International Rivers တို့ ကိုမေးလိုတာကတော့ ဒီလိုပါ၊ ၇၅၀၀၀ မှ ၈၀၀၀၀ ထိ ရေကာတာ လုပ်ပြီးတဲ့အမေရိကန် ကိုဘာဖြစ်လို့သွားမတားတာလဲ?
ရေကာတာထောင်ချီရှိတဲ့ အီးယူ၊ ယူကေ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမဏီ၊ အိန္ဒိယ စသည်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့
မြစ်ကောမယ် လူ တိရိစ္ဆာန် ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာလေ၊ သူတို့ဆီက မြစ်ကောလို့လူသူတိရိစ္ဆာန်
ဓာတ်ပုံတွေရှိရင်လဲ “မျှ” ဝေ စေလိုပါတယ်၊ဘာကြောင့်မပြနိုင်၊ မပြချင် တာလဲဆရာ ဆရာမတို့ရေ?
အမေရိကန်မှာရေအားလျှပ်စစ် ၅၀ % ထပ်တိုးအုံးမယ်၊ရေကာတာတွေမဖျက်ဘဲမွမ်းမံတိုးချဲ့အုံးမယ်၊
အသစ်တည်ဆောက် အုံးမယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ပူနွေးမှုအကြောင်းတရားသွားဟောပေးပါအုံး၊ဘာဖြစ်လို့
“ကုလားမနိုင် ရခိုင်မဲ (မေး)” ဖြစ်မနေဘူးလားဆရာ ဆရာမ တို့?
လျှပ်စစ်ခ နှုန်းထား နဲနဲလေးတိုးလာတာတောင် မတတ်နိုင် တဲ့ ပြည်သူကိုမငှဲ့ဘဲ၊ဈေးကြီးတဲ့
နေအား လျှပ်စစ်၊လေအား လျှပ်စစ်တွေကိုသုံးဘို့ သူဌေးသား လို ခပ်လွယ်လွယ်ပြောတတ်ကြတယ်၊
ဒီပေကြိုးမျိုးနဲ့ အနောက်နိုင်ငံကို ယခင်ကလဲအကြပ်မကိုင်၊ခုလဲမကိုင်၊နောင်လဲကိုင်မှာမဟုတ်ပါ၊
ဖွံ့ဖြိုးစ မွဲတေတဲ့နိုင်ငံကြတော့ ဒီပေကြိုးနဲ့ လာအကြပ်ကိုင်တာက မတရားဘူးထင်ပါတယ်၊
စက်မှုလက်မှုတော်လှန်ရေး ၁၇၆၀ မှစပြီး ခုထိ နှစ်ပေါင်း ၂၅၆ ကာလ အတွင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံ က မီးသွေးရေနံနဲ့လောင်စာတွေသုံးကာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ညစ်ညမ်း စေပြီး မှ ခုဆိုရင် ကျန်နိုင်ငံ
တွေကို ပေကျိုး အသစ်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတားနေတာပါ၊
ကျောက်မီးသွေး၊ရေနံ၊လောင်စာ တို့ကနေလျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်တာကဈေးကြီးတယ်၊သတာဝ ဝန်းကျင်ကိုလဲညစ်ညမ်းစေတယ်၊ရေအားနဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်ရင် ဈေးသက်သာပြီး သဘာဝ ဝန်းကျင်အတွက်ကောင်းတယ်၊ ဒါလဲလိုက်ဟန့်တားနေတာက သဘောရိုးများလား မဆီမဆိုင်ပထဝီနိုင်ငံရေးများလား၊
တန်ရာတန်ရာ လက်လှမ်းမှီသလိုမဟုတ်ဘဲ သူဌေးသားဂိုက် လိုက်ထုတ်နေတာလား မေးစရာတွေပါ၊
ကမ္ဘာ့ပူနွေးမှု ဆိုတာ အလှန့်တကြားလုပ်တာ၊Donations, Grantအလှူခံ ရံပုံငွေရအောင်လုပ်တာ၊သိပ္ပံနည်းနဲ့
ခိုင်လုံအောင် သက်သေမထူပြနိုင်၊ အချက်အလက်တွေကိုလုပ်ကြံတယ်၊ခိုးပြင်တယ် ဆိုပြီး
အမေရိကန်သမတလောင်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် ကလဲhoax (လိမ်ညာတာ) ဆိုပြီး Paris Agreement ပါရီသဘောတူညီမှု
တချိန်တုန်းက အိုဘားမားက တရုပ် ကုလားတို့ မပါလာရကောင်းလား စိတ်စိုးခဲ့ပြီး၊ခုပါလာတော့
လဲ ထရမ့်က မပါချင် တမျိုး ကြီးပါလား၊
ဆရာကြီး တို့သမတသစ် Trump ထရမ့်နဲ့ အရင်ပြောကြည့် ပါအုံးလေ ကိုယ်ကဘဲမသေမချာ ယာင်တောင်တောင်နဲ့
Donald Trump calls global warming ‘a hoax’ at Hilton Head rally
see youtube video….
Yes, Trump Did Say Global Warming Is A Hoax – NBC News
Sep 27, 2016 – In December 2015, Trump said in South Carolina, “Obama’s talking about all of this with the global warming and …alot of it’sahoax. It’sahoax …
With Hurricane Matthew wreaking havoc, the Left is predictably seizing the storm asameans of promoting their …..
1. The Climategate scandal proved that key data involving man-made climate change was manipulated. In 2009, the public discovered emails from the University of East Anglia’s Climatic Research Unit exposing how scientists who have been enormously influential in promoting the concept of man-made climate change actually attempted to cook the books to obtain results that served their narrative that the planet was heating atadangerous trend due to higher levels of carbon dioxide…..
theMYTHS / FACTS
MYTH 4: CO2 is the most common greenhouse gas
FACT: Greenhouse gases form about 3% of the atmosphere by volume. They consist of varying amounts, (about 97%) of water vapour and clouds, with the remainder being gases like CO2, CH4, Ozone and N2O, of which carbon dioxide is the largest amount. Hence, CO2 constitutes about 0.04% of the atmosphere. While the minor gases are more effective as “greenhouse agents” than water vapour and clouds, the latter are overwhelming the effect by their sheer volume and – in the end – are thought to be responsible for 75% of the “Greenhouse effect”. (See here) At current concentrations,a3% change of water vapour in the atmosphere would have the same effect asa100% change in CO2.
MYTH 6: The United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has proven that man–made CO2 causes global warming………
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းတာကလည်း သိပ်ပံပညာနဲ့ ထိန်းမှ ရတော့မှာ။ြ